Ungakufumana njani ukuvuza kwiNkqubo yokuPholisa imoto yakho
Ukongeza ekugcineni inqanaba lamanzi kunye nokupholisa apho kufuneka ukuba ube khona, ungathintela inkathazo kwinkqubo yokupholisa imoto yakho ngokugcina iliso ngaphandle kokuvuza nokutshintsha ithumbu elidala okanye elonakeleyo. Iindawo ezinengxaki kwindawo yokupholisa- iindawo apho kufuneka ujonge khona ukuvuza okupholileyo- zibonisiwe apha.
Jonga inkqubo yokupholisa ukuvuza kunye nezinye iingxaki.
Jonga phantsi kwesithuthi sakho: Jonga phantsi kwesithuthi sakho kusasa, xa isithuthi sihle kwaye sipholile, ukubona ukuba akukho nto ilulwelo emhlabeni ngaphantsi kwendawo engaphantsi kwe-hood. Ukuba ubona ulwelo, ncamathela umnwe wakho kulo uze ulinuke. Ukuba iyaphola (luhlaza, obomvu, luhlaza okwesibhakabhaka, orenji, okanye umbala onomhlwa), fumana isibane, ujonge ezantsi kwentloko yemoto ebekwe ngaphezulu kwedama, kwaye uzive ujikeleze ubumanzi. Qiniseka ukuba ujonga iithumbu ezikhokelela kwindawo yokugcina kwakhona kunye nerediyetha.
Jonga irediyetha: Yiva ngaphantsi kweeradiyetha ukubona ukuba iyavuza na, kwaye ujonge iradiyetha yakho ukuze ubone iidipozithi ezimhlophe okanye amabala anemibala erusi. Oku kubonisa ukuvuza okudala okume, kodwa akunakuba kukudala konke oko; amanzi athambekele ekubeni ngumphunga ngokukhawuleza kwiradiyetha eshushu. Jonga kwakhona isiphelo esingaphambili seradiyetha ukubona ukuba umphezulu ungcoliswe kukungcola, amagqabi, kunye neencukuthu. Ukuba kunjalo, zihlambe ngebrashi kunye nethumbu lomyezo.
Jonga ikepusi yoxinzelelo: Ukuba isithuthi sakho sitshisa kakhulu, iyeza elinexabiso eliphantsi kukuthenga ikepusi entsha yokhuseleko - okanye ubuze umatshini ukuba avavanye ikepusi yakho ukuze abone ukuba isebenza kakuhle. Ukuba ufuna entsha, nika umthengisi indlela yokwenza, imodeli, kunye nonyaka wesithuthi sakho kwaye ujonge umda woxinzelelo (psi) kwikepusi entsha ngokuchasene nencwadana yomnini wakho ukuze uqiniseke ukuba ufumana eyiyo.
iintlungu ezibukhali phantsi kwembambo yasekunene
Jonga iithumbu: Rhoqo ujonge onke amathumbu aphantsi kwentloko yesithuthi sakho, nokuba unengxaki okanye awunayo. Ngenxa yoloyiko olukhawulezileyo, akukho nto injengokuba kuqhume umbhobho xa uqhuba. Ukuba ngumbhobho weradiyetha, ishawa yomphunga iyoyikisa kakhulu kwaye iyingozi kakhulu. Ukuba i-hose vacuum hose iyahamba, ilahleko ngequbuliso ye-vacuum inokumisa isithuthi sakho phakathi kwezithuthi. Ukujonga ithumbu lakho kunye nokubuyisela okuhle ngaphambi kokuvuza kunokugcina imithambo-luvo kunye nepokotho yakho ekuhambeni kwexesha.
Ukuba ufumana ithumbu elithambileyo nelinamaqhuqhuva, elidumbileyo, elilukhuni okanye elaphukileyo, eliqhekekileyo, elivuzayo, okanye elimakishwe ngediphozithi emhlophe apho izinto ziye zavuza kwaye zomisa, zibuyisele kwangoko ngaphambi kokuba ziqhekeze.
Ukuba ufumana ithumbu eliwile xa injini ibanda kodwa ibuya umva xa ususa isiciko soxinzelelo, ikepusi okanye inkqubo yokubuyisela kwisipholisi- hayi ithumbu.
Ukuba imoto yakho iqala ukufudumeza kwaye ukrokrela ukuba umbhobho ongezantsi weradiyetha uyawa, yima kwindawo ekhuselekileyo kude nezithuthi. Qiniseka ukuba imoto isePaki okanye ayithathi cala kwezopolitiko ngokupaka. Emva koko vula ihood ngaphandle kokucima injini. Jonga ithumbu elisezantsi (lumka ukuba iinwele zakho okanye iimpahla zakho zingabanjiswa kwifeni okanye ibhanti yokufikelela) kwaye ubone ukuba ngaba umbhobho uwile. Ukuba iye yawa kwaye unayo ipayipi elunge nayo, yitshintshe.
Uyenza njani i-cake minecraft
indlela yokunyanzela ukuqala kwakhona kwe-mac
Itshathi yobomi yehafu
iyeza elifanelekileyo le-vertigo
ukujoyina imilo ejikeleziweyo